Ukukhangela ngokugqithiseleyo lo msebenzi we-PBS osongela ubomi obuvela kuDen Kolder: uMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	5 Juni 2019	• 20 Comments
Khangela phambili kule ngxaki yokusongela ubomi bePBS-er (i-professional population saboteur) ukusuka kwi-clique yaseDen Kolder. Nceda uqaphele ngeli xesha akukho nzulu! Ngelo xesha akukho PsyOp (ukusebenza kwengqondo) ukunyusa umthetho omtsha.
Ngokuqinisekileyo oku kukuphazamiseka kukaMarko Rutte kunye nefama ngokutsha TBS iphunyukile ukusuka kwiklinikhi kaMichael P. eDen Dolder, kodwa kuyacaca ukuba ungenza njani umntu ongekho umntu ngokusebenzisa software elula yokutshintsha ubuso. Ifoto yesiprofayili ithatha imizuzu eyi-10 yomsebenzi (nge lewebhu) kwaye ndincoma ukuba ufunde le ngcaciso engezantsi ngokucokisekileyo ukufumanisa ukuba kulula kangakanani ezo ndlela zingasetyenziselwa ukudlala nabantu abaninzi beendaba ezibuxoki.
Ngoku kukho iprojekthi kwimakethi evumela ukuba unike intetho evulayo emva kwe-webcam (okanye kwisitrato, nge-screen-green) kwi-PC eqhelekileyo kwaye ubeke ubuso kunye nesandi somnye malunga nalo. Oku kwenziwa ngexesha langempela kwaye kungekho ziphazamiso. Uyakubona oku ngezantsi (funda kwakhona phantsi kwevidiyo).
Amajelo asincede siqiniseke ukuba konke kuya kwenene, kodwa asisoze sakwazi ukuzihlola thina kwaye kufuneka sicinge ukuba asiyidlala ngeendlela zaseHollywood. Isiphumo kukuba abantu banokutshutshiswa ngengqondo ngaphandle kwesizathu kwaye banokuphelelwa yintyala zabo bonke ubomi babo, kuba umthetho awusayibakhusela. (Funda apha ilandelayo)
Uludwe lwekhonkco lovimba: facewaponline.com, telegraaf.nl
tags: Anne, le, udoti, Faber, eziziimbalasane, klinikhi, klinkiek, Michael, iindaba ezibuxoki, basinda, basinda, P., I-Pan indlu, tbs, tbser
5 Juni 2019 kwi-20: 19
Nguye uDeker ofanayo ozama ukuphelisa uncedo lwezomthetho, ngoko inkosi yamkela imiyalelo yakhe. Beefehl ist befehl. Ekuqaleni ndacinga ukuba uMnumzane uTam van 'uHek's u-crazy brother ubalekile 😉
5 Juni 2019 kwi-20: 24
Isithombeni sandikhumbuza ikakhulukazi kaLeo Blokhuis. Mhlawumbi basebenzise njengomzekelo wokungena?
5 Juni 2019 kwi-20: 29
Amehlo akhumbuza uTom van van Hek ... ukuphefumlelwa kokuqala.
5 Juni 2019 kwi-21: 07
Lo myalezo ubaluleke kakhulu, kuba ubonisa ukuba baya kulungiselela umthetho apho wonke umntu uya kugcinwa ngaphakathi. Ngoko ukupheliswa kwekhefu.
5 Juni 2019 kwi-21: 08
I-Goelag i-gulag yaye kufuneka uhlale kuyo yonke imihla yobomi bakho njengomhlali.
5 Juni 2019 kwi-20: 32
... okanye zombini u-BNer kuba uthetha ngokungaqondi kakuhle. Ubungalindela ukuba baya kuchitha ixesha elincinane belungiselela ukuthembeka okucacileyo kwi-thinker engundoqo 😀
5 Juni 2019 kwi-20: 35
.. ngoku ndicinga ngakumbi nangakumbi ngokufana ne Brech, ndevu, obomvu njl = i-NLP anchors
5 Juni 2019 kwi-20: 42
5 Juni 2019 kwi-20: 49
@ Qalisa ukuqonda oko uthethayo, ukukhangela ngokukhawuleza ngeGoogle kwi jos b kubonisa ezi ziphumo. Iyokugqibela kaJoseph B ilayishwe iiyure ze-8 ezedlule kwiziteshi zamashishini ezifana ne-RTL, i-SBS. Lo mfanekiso ngu-8 iiyure ubudala kunye nomhlaba weTalpa Networks (De Mol)
5 Juni 2019 kwi-20: 55
Bona, abafana abasuka kwiskripthi, abayi kwenza umzamo wokwenza i-spyop ithembeke. Abokuqala banamandla. Ngubani ongathatha kwiHen? Zizo zonke izithuba eziphambili. Ukongeza, bayazi ukuba i-Neanderlander yeyona nto iphantsi kangakanani. Abo babenobulumko bagcina umlomo wabo uvaliwe ngenxa yokuba ngokwawo bayingxenye yeKlabhu e-Neanderland enquma yonke into.
Kuyinto ecacileyo ekukhohliseni ubuso bakho kunye ne-anchor / isitampu ukuba umveliso we-Spyop / yecaterari uvela 'kurhulumente', ukucinga okubalulekileyo kwe-Neanderlander idlula. Ukuba nawe ngoku wenza iiprogram! I-brainwash yolwandle yenza ababenamakhwenkwe abafana kwi-script, abahlawulwanga nantoni na, abo ngobuso babo basasazeka bavakalisa ukungaboni kakuhle kwaye ukucinga ngokugqithisileyo kuyaphumelela. Kodwa nangona i-Neanderlander iphuma kwi-coma yakhe kwaye icinga into engalunganga apha. Oko aya kukwenza, unokuyenza kwaye xa eqonda ukuba uya kubuya kwi-cona yakhe. Ubusuku obuhle, amakhoboka. Amakhwenkwe avela kwiskripthi ahleka emva kweemifanekiso.
6 Juni 2019 kwi-18: 10
hahaha kwaye ngoku ngokukhawuleza ibha phambi kwamehlo akhe, uthini na?
6 Juni 2019 kwi-00: 07
Ukuba unobungqina bokuba iSinterklaas ayikho, ngoko abantwana kufuneka bakholelwe ukuba kukho, kuba kufanelekile kwaye akufanele uphazamise, yinkampani, ushiye abantwana bodwa.
Ngokuqinisekileyo abemi abafuni i-psychopath kunye nesiseko sokubulala kwisitalato, kodwa ngoku ke abanye abahlali baziswa phantsi kwesinye isikolo.
Indala endala: Ukuthelekisa iiapulo kunye namapheya.
Ukuphela kwegama elikhululekile kweli nqaku lisuka kwi-telegraaf apho baphosa khona ukuzukiswa kwamaNazi ngaphantsi komntu omnye.
Ubulumko obukhulu kakhulu bokunciphisa inkululeko yokuthetha kunye nophando.
6 Juni 2019 kwi-06: 21
Abayi kususa imifanekiso yamaNazi kunye neentengiso. Ngokuqhelekileyo ngabo bashicilela baze basasaze le ngcaciso. Ekugqibeleni, bafuna i-boogeyman. Memeza.
6 Juni 2019 kwi-09: 16
Ubuncinane baqeshe umdlali omhle ngeli xesha ...
Kucacile ukuba yiyiphi imithetho emitsha kufuneka iqaliswe.
Udade uyabathanda ubomi bomzalwana, kodwa uhlala emtyelela ekliniki. "Ukhangeleka inokwethenjelwa, nditsho ukuba yiphutha elikhulu ongayenza" mhlawumbi lifanelekileyo kakhulu kulo msebenzi. Umnyango kaMama kufuneka uvalelwe, kuba umzalwana ufuna ukumlimaza. Kodwa si tyelela ngeveki (ngokuba ukuba ufumana kuphela unyango lwakhe ulungile).
6 Juni 2019 kwi-09: 24
Ukususela kumzuzu we-19e, u-Jeroen Pauw usibonisa ukuba yeyiphi i-software ebenayo kwi-ofisi yokuhlela .. akukho ngxaki yokwenza umntu abonakale ekhulile.
Ayikho inkathazo yokubeka udadewabo obunzulu obunobuso (umlingisi) udade?
6 Juni 2019 kwi-09: 44
Ubonakala njengoRutte! Basebenzisa amehlo kaRutte! Ukubonisa nje ukuba bayazi ukuba uyaphazamiseka! Isitimela sigxina! Kuza kufuneka sijongane nomgaqo-mozulu (ukwesaba)!
6 Juni 2019 kwi-11: 11
Ngaba ufunde oko ndabhala? Ndenze le fayile yesiprofayili njengento yokutshatyalaliswa. Mane ufunde umxholo wale nqaku esikhundleni sokuba uphendule nje kwisithombe.
6 Juni 2019 kwi-11: 17
i-barbarra erbars ayifundi, bayathanda kuphela ukuthumela izihloko zengxoxo. Mhlawumbi iberi inezinto ze-shoebat ezithengiswayo 😀
6 Juni 2019 kwi-10: 56
Ivenkile yezithombe kuphela kuDe Mol kunye nabahlobo, abanye bahlanjululwa.
6 Juni 2019 kwi-17: 03
Ngethamsanqa ba noPeter M .. Yiyiphi intuthuko kwi-Neanderland. Ukulala kwakhona kuze kube yilapho ulandelwa ngokulandelwayo. Yeyiphi ilizwe, amakhoboka akholelwa yinto yonke into oyithethayo uyise.
« UJos B. (Nicky Verstappen) I-PsyOp ngoku isetyenziselwe ukufuna iingxelo zabaxhasi kummeli?
UPeter M. (ovela kuloo dade othembekileyo kuJerenen Pauw) uphinde wabanjwa »
Iindwendwe ezipheleleyo: 12.205.731